Raw Synephrine HCL Powder (5985-28-4) Ndị na-emepụta - Phcoker
Synephrine HCL ntụ ntụ (5985-28-4)
Synephrine HCL ntụ ntụ bụ ihe na-emekarị na alkaloid chemical compound na-achọta osisi na amịpụtara maka mgbakwunye dị ka mgbakwunye …… ..
ikike: 1450kg / ọnwa
Synphrine HCL ntụ ntụ (5985-28-4) video
Synephrine HCL ntụ ntụ (5985-28-4) Nkọwapụta
Product Name Raw Synephrine HCL ntụ ntụ
Chemical Aha Synephrine hydrochloride; 5985-28-4; 4- (1-Hydroxy-2- (methylamino) ethyl) phenol, hydrochloride;
Klaasị ọgwụ ọjọọ Abụba furu efu
molekụla Fnhazi C9H14ClNO2
molekụla Wasatọ 203.666 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 203.071 g / mol
Mgbu Point 147-150 ° C
Ebe Esi 341.10 Celsius. @ 760.00 mm Hg (est)
Ọkara Ndụ nke Ndụ Ọ dịghị ụbọchị dị
Agba White na-acha ọcha ntụ ntụ
Sume Ọ dịghị ụbọchị dị
Sịkwa akwa Tigwe friji
Antinye O doro anya na ihe kachasị abụba na-ere ọkụ
Raị Synephrine hcl uzuzu (5985-28-4) Nkọwa
Synephrine HCL ntụ ntụ bụ ihe na-emekarị na-emepụta ọgwụ alkaloid na-achọpụta ma jiri ya mee ihe dị ka mgbakwunye. A na-akpọ synephrine mgbe ụfọdụ dịka 'ocha oroma' dị ka esi na obere oranges nweta ya. N'ikwu eziokwu, a na-ahụkarị ya n'osisi oroma, nke mere na a maara ya dị ka ogbe ocha. A na-eji mmanụ oroma edozi maka ọtụtụ nsogbu ndị yiri ya na nsogbu ndị ọzọ nke oge a dịka nhụjuanya dị arọ nakwa dịka enyemaka maka agha megide ụkwụ onye egwuregwu. ọ bụ otu n'ime ogige ndị dị na ogbe mmanụ ma chere na ọ bụ ntọala nke ọgwụgwọ ọrịa ahụ Raw Synephrine HCL ntụ ntụ, ihe ịrụ ụka na ya bụ ihe kachasị na-ere ọkụ na-ere ọkụ. A na-enweta sinephrine site na oranges, ma ozugbo i nwere ya, ị nwere ike ga-erite uru n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche.
Dị ka ihe na-emezi ihe na-edozi ahụ, erinefrine HCL na-adị ize ndụ maka ọtụtụ ndị toworo eto mgbe ejiri ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Otú ọ dị, enwere mmetụta ọjọọ dị n'etiti ndị ọrụ na-ewere ọtụtụ synephrine hcl. Synephrine bụ ihe na-akpali akpali, n'ihi ya, ọ dị mkpa ịmalite na ụda ala iji chọpụta ndidi. HCL synephrine dị ukwuu nwere ike ime ka mmụba ngwa ngwa na mgbali ọbara, arrhythmias gbasara obi, ikpuchi akpụkpọ ahụ, ebe obibi, nkwụsịtụ, nsogbu, nsogbu iku ume, dizziness, isi ọwụwa, egwu, ọbara ọbara dị ala na mmetọ ọbara shuga, mgbu afo, ọgbụgbọ, na afọ ọsịsa, karịsịa na ndị ọzọ stimulants.
Synephrine hcl uzuzu (5985-28-4) Ngosipụta nke Action
A na-ejikọta mmetụta nke obi na ligands na adọtara na-anabata ihe. N'ikpeazụ, mgbe njikọta na-ejikọta ndị nabatara na-adrenergic, mmezigharị na-eme, na mgbe ejiri aka na-anabata ndị nabatara β1-adrenergic, nkwukpọ obi na ọnụọgụ obi. Nchọpụta na-egosi na synephrine hcl ntụ ntụ na-ejikọta ndị nabatara β3-adrenergic, na-eme ka mmụba nke ikike ahụ mmadụ belata abụba. Ịnakwere ndị nabatara β3-adrenergic adịghị emetụta ọnụ ọgụgụ obi ma ọ bụ mgbali elu ọbara. Ọzọkwa, n'ihi na synfrine na-egosi obere ma ọ bụ enweghị ihe ọ bụla na-anabata α1,, α2,, β1, na β2-adrenergic receptors ma ọ pụtaghị na ọ na-emetụta mmetụta adrenergic, mmetụta aka nke obi, dịka mmụba nke obi na ọbara mgbali, abụghị ahụmahụ ndị a na-ejikarị eme ihe, n'adịghị ka ọtụtụ phenylethylamine na phenylpropanolamine. Mgbanwe obere nhazi na - akpata nnukwu ọdịiche dị na adrenergic receptor e kegidere ma mesịa nwee ike ịmịpụta ọrịa obi.
Synephrine hcl ntụ ntụ na-emekwa ka ahụ mmadụ dịkwuo ike na-emepụta nke carbohydrates site n'inwekwu ume dị ka ụdị ATP.49-52 Ọ na-eme ka mkpụrụ ndụ glucose dị na sel ndị nwere ike, tinyere glycogenolysis, gluconeogenesis, glycolysis, na ikuku oxygen. E gosipụtara itinye aka na calcium ion na cAMP na adrenergic receptors ka ha na-etinye aka na usoro mmepụta ihe ndị a, na-egosi nsonye nke ọtụtụ usoro.
N'akuku ya, ojiji nke Synephrine hcl ugbo ga-egbochi ntinye nke NF-kB. Nke a bụ isi ihe na-akpata ọrịa mkpali ndị dị ka ụkwara ume ọkụ. A chọpụtawokwa iji ntụpọ Synephrine na-emetụta ihe e mere na eotaxin-1 hormone n'ụzọ dị ukwuu. Nke a na-egbochi ijegharị nke eosinophil na mpaghara ọkụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị nke ọma gosipụtara site na nnwale, a chọpụtala iji Synephrine hcl ntụpọ mechie ihe acetylcholinesterase. A maara ọgwụ a iji mee ka ọrịa Alzheimer nwee nsogbu.
uru nke Synephrine hcl uzuzu (5985-28-4)
Synephrine Hcl maka ọnwụ ọnwụ
Synephrine Hcl na-enyere gị aka inweta agụụ
Synephrine hcl na-eme ka mma glucose dịkwuo mma
Synephrine Hcl na-enyere ndị glycogenesis aka
Synephrine hcl nyere aka na-achịkwa ọrịa shuga
Synephrine hcl melite mgbaze
Synephrine hcl belata nervousness tupu ịwa ahụ
Synephrine hcl melite ọnọdụ uche na ike
Synephrine Hcl nyere aka ịchịkwa bacteria na-emerụ ahụ
Synephrine hcl nyere aka belata mbufụt
Akwadoro Synephrine hcl uzuzu (5985-28-4) Ogwu
Synephrine hcl usoro onunu ogwu a kachasi eme ihe banyere 100mg kwa ubochi. Nke a na-atụle ga-ezu onunu ogwu ruru eru ọbọ a arọ ọnwụ. Otú ọ dị, ego a tụrụ aro na ọbụna ndị ọrụ nwere ọnọdụ ekwesighi ịgafe bụ 200mg kwa ụbọchị. A na-ewere ihe ọ bụla dị n'elu akara a ka ọ bụrụ ihe na-egbu egbu ma tinye onye ọ bụla n'ihe egwu nke ịnwe raft nke mmetụta na-egbu egbu metụtara na-akpali akpali. Ọ bụ ihe amamihe, ịmalite, 10 ka 20mg iji hụ na ntụpọ Synephrine hcl na-adabaghị na ahụ gị. Mgbe ị gụsịrị usoro ọgwụgwọ mbụ a, ị kwesịrị iwepụta oge iji chọpụta mmeghachi omume nke ahụ na mgbakwunye ahụ. Ọ bụrụ na ihe niile dị mma, a ga-agbakwunye usoro nke abụọ nke ihe dịka 20mg mgbe awa abụọ gachara. N'akụkụ, oge kachasị adị nchebe na-ewere ntụ ntụ Synephrine hcl otu ugboro kwa awa abụọ.
mmetụta nke Synephrine hcl uzuzu (5985-28-4)
Ojiji nke Synephrine na-esokwa mmetụta dị iche iche dịka ọgwụ ọ bụla. Mgbe otu di na nwunye jiri synephrine hcl mee ihe na caffeine. na-abịa na ụfọdụ mmetụta ndị ọzọ. Ndị na-esonụ bụ ụfọdụ mmetụta dị egwu:
Ọbara mgbali elu.
Ọ dị njọ ma ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe dị elu tupu ịwa ahụ.
Ọkpụkpụ ọbara na spasms na thrombosis
Mkpụrụ obi mgbawa (ventricular fibrillation)
Mbelata nke nha (rhabdomyolysis)
Nrụrụ na-emebi n'ihi ụba nrụgide na mọzụlụ (ọrịa nke abụọ)
Ihe mgbu nke akpụkpọ ụkwụ (variant angina)
Raw Ceilistat ntụ ntụ (282526-98-1)